Somaliland: Xukuumadda Oo Caddaysay Mawqifkeeda Doorashada Madaxtooyadda - #1Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)-Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa caddaysay mawqifkeeda ku waajahan doorashadda Madaxtooyadda, waxayna si cad u shaacisay qorsheheeda cidda ka qaybgelay marka la gaadho xilligeeda.
Wasiirka Warfaafinta dhaqanka iyo wacyogelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore, ayaa waraysi uu siiyay Idaacadda BBC, laanteeda Af-soomaaliga, wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay dhaliilo uu guddoomiyaha Xisbiga ugu weyn mucaaradka ee WADDANI, Xirsi Cali Xaaji Xasan u jeediyay.
Dhaliilahaa, ayuu kusoo bandhigay Guddoomiye Xirsi Balanqaadyadii Baaqday ee Madaxweyne Biixi iyo Hadalo uu sheegay in ay beenoobeen Afartii sannadood ee uu xilka hayay, balse Wasiir Koore, wuxuu difaacay eeddaha iyo dhaliilaha Guddoomiyaha WADDANI.
Laxidhiidha: “Balanqaadyadii Baaqday Iyo Hadalladii Beenoobay Ee Xukuumadda Madaxweyne Biixi” Guddoomiye Xirsi
Sidoo kale, wuxuu sheegay in doorashada ururrada siyaasadu ay kasoo horaynayso doorashadda madaxtooyadda, kadibna saddexda urur ee kusoo baxa tartanka Ururrada ay doorashada madaxtooyadda ku tartamayaan, kuwaas oo noqonaya xisbiyadda rasmiga ah ee tobbanka sannadood ee soo socda.
Wallow uu sheegay in doorashadda madaxtooyadu ay wakhtigeedii ku qabsoomayso oo aan maalin lagu dari doonin, balse wuxuu carabka ku adkeeyay in doorashadda ururrada siyaasadu marka hore dhacayso.
“Waxaa la iclaaminayaa 45 cisho oo loogu diyaar garoobayo ururrada cusub, xukuumadda aan afhayeenka u ahay hal maalin ku dari mayso, marka intasoo talaabo la qaado saddexda xisbi ee soo baxaa waxay galayaan doorashadii madaxtooyadda.” ayuu yidhi Wasiir Koore.
Mar uu ka jawaabayay in maadaama doorashadda Madaxtooyaddu kasoo horayso muddada ay ku egtahay taariikhda Ururrada, sababta ay doorashadda Madaxtooyadda dib ugu riixayaan, wuxuu sheegay in Lix bilood ka hor ay hawsha Is diiwaanta ee nidaamka Ururradu soconay, sidaa awgeed marka hawshaa la dhammaystiro saddexda Xisbi ee soo baxaa gelayaan tartanka Madaxtooyadda.
Dhinaca kale, mar la weydiiyay in arrinta mucaaradku ku eeddaynayaan ee mudda kordhinta ay ku gaadayaan xukuumad ahaan, wuxuu sheegay in haddii aannay iman asbaab macquul ah oo lagu kordhiyaa aannay diyaar u ahayn mudda kordhin xukuumaddu.